Ikusasa Lohambo | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Ikusasa Lohambo
(Kugcine ukubuyekezwa On: 19/09/2020)
Ezokuthutha, ngazo zonke izindlela, ungumgogodla wanoma iliphi izwe nomnotho walo. Kwakunemigwaqo kuphela, wesitimela, nomoya esikwazile ukuxhuma umhlaba ngendlela yokuthi waba mncane kakhulu kunalokho oyikho ngempela. Ngakho, uma sibheka izimboni ezinkulu emhlabeni jikelele, izinto zokuhamba zingenye yezisebenza kakhulu, eshintsha njalo ukuze kube ngcono ikusasa lethu.
Ukuthambekela kwakamuva embonini yezohambo nokuhamba kube ekwakheni izinketho eziluhlaza okotshani. Ukuhamba okudingeka kakhulu ukusindisa imvelo yethu, ukuthuthukiswa okusha kwezokuhamba sekuvele kusebenza kulomgomo. Nokho, lezi zinqubekela phambili zibuye zephule nemingcele yokuthi besihamba kanjani kuleli khulu leminyaka elidlule. Futhi ngokwenza lokhu, basiholela ikusasa lokuhamba elizoshesha ngokushesha, ephephile, futhi ngokoqobo baphume kulomhlaba.
Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Gcina Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
Ikusasa Lohambo: I-Space Tourism
Isikhala sibe umngcele wokugcina wesintu isikhathi eside kunazo zonke. Nokho, selokhu sanyathela enyangeni edlule, akukaze kube khona okunamandla okujabulisa umphakathi ojwayelekile. Manje nokho, kunomjaho oqhubekayo wokuthatha abantu ungene emkhathini, nokuzilibazisa. Ukuvakasha komkhathi kuyinto enkulu elandelayo, futhi ngenkathi kungabiza futhi kukhetheke, isinyathelo esikhulu esiqonde esikhathini esizayo, okuzobandakanya konke ikoloni Mars noma ukwenza iziteshi zezindawo lapho abantu abangamakhulu bangahlala khona ndawonye. Nokho, ngenkathi ososayensi kungenzeka bathathe isinyathelo esiqonde ngqo, kungadingeka silinde izizukulwane ezimbalwa ngaphambi kokuba kubonakale inqubekela phambili ebonakalayo ebonakalayo.
Dusseldorf kuya eMunich amathikithi
Dresden kumathikithi eMunich
I-Paris kuya amathikithi eMunich
Bonn amathikithi eMunich
Umkhakha Wezokuvakasha Nezokuhamba: Izimoto Ezishayayo
Buza noma yimuphi umuntu ngomqondo wabo wokuhamba ngokuzayo, futhi maningi amathuba okusho izimoto ezingashayeli. Kukhona izitimela ezikhona emhlabeni wonke ezisebenza kule nqubo. Ngaphezu kwalokho, isikhathi eside kunazo zonke, ososayensi kanye nabaholi bezimboni bebelokhu besebenzela ukwenza imigwaqo iphephe ngokufaka ubuchwepheshe kwansuku zonke zethu isipiliyoni sokushayela. Okwenza izimoto ezingashayeli ukuthi zikufanele ukulinda ukuthi kuzowushintsha ngokuphelele lo mkhakha ngezindlela eziningi. Kusuka ekubeni ngaphezulu imvelo ekuphepha emigwaqweni, abantu bazokwazi ukumboza amabanga amade ngaphandle kobunzima bokushayela amahora amaningi.
Ikusasa Lohambo: izitimela
Eyodwa endala Izinhlobo zezithuthi zomphakathi emhlabeni, izitimela zisenendawo ngokusobala endaweni yethu. Ngokumangazayo, mhlawumbe kunangaphambili. Njengoba futhi kwenziwa ubuchwepheshe obusha ukwenza amasistimu wesitimela aphephe, Ngokushesha, futhi kulula kakhulu, isidingo esiyisisekelo sohlelo olunjalo sizokhuphuka ngokuqondile. Izitimela sezivele ziyinto yokulingana kwezenhlalo njengoba abantu abacebile kakhulu bavame ukugibela eceleni kwabampofu kakhulu wezifundo ezisebenzayo kepha ngenxa yokwanda okusheshayo kwabantu emhlabeni, ikakhulukazi emazweni athuthukile, Izinhlelo ezisebenza kahle nezingabizi kakhulu ezitimeleni zizobaluleka ekulweni nokuxinana kwezimoto. Lokhu futhi kuzoba nomthelela omkhulu emvelweni njengoba izitimela zizokwazi ukusebenza kahle emandleni ahlanzekile ngenkathi ngasikhathi sinye izimoto eziningi ezisindayo zephethiloli zisuka emgwaqweni futhi kwehlisa ukuphuma kwe-CO2 komhlaba.
I-Munich eya kumathikithi eZurich
IBerlin iya kumathikithi eZurich
I-Basel eya kumathikithi eZurich
I-Vienna kuya amathikithi eZurich
IHyperloop ichazwa ngokuthi "indlela yokuqala enkulu yokuhamba ngaphakathi 100 iminyaka. ” Kubandakanya ukuhamba ngesivinini esikhulu ngaphakathi kweshubhu, kuxhuma indawo eyodwa nenye. I-Hyperloop kungenzeka ukuthi isetshenziselwe ukuthutha imithwalo kanye nabantu. Nokho, yize i-Elon Musk engaphikisi ingaphambili lobu buchwepheshe, amanye amazwe akhona engabaza ngeHyperloop futhi uma kufanelekile ukutshala imali ngempela. Noma kunjalo, ukuhamba ngale ndlela entsha yokuhamba kuseduze neqiniso kunalokho ebesikulindele, ngezivivinyo nokwakhiwa kwamashubhu asevele ekhona eCalifornia futhi mhlawumbe neYurophu kungekudala.
I-Hamburg kuya amathikithi eCopenhagen
Rotterdam to Hamburg amathikithi
Lokhu ikakhulukazi kubahambi besihlalo esinamasondo, abakujabulayo ukuhambela izindawo ezintsha kodwa bakhetha ukukwenza lokho kusuka ekududuzeni kwamakhaya abo. Ngenkathi i-VR isivele ithengisile, kungekudala, sizobona ukuhlanganiswa phakathi kwe-VR, IR, ne-AR, okuholela kwisipiliyoni esisondele empilweni yangempela ngangokunokwenzeka. Kusuka ekuvakatsheni izimangaliso eziyisikhombisa zomhlaba ukuya ekujuleni ungene eGreat Barrier Reef, lobu buchwepheshe obusha buzosiza abantu babone umhlaba kunanini ngaphambili.
Sizokujabulela ukukusiza uthole izinketho ezinhle kakhulu zamathikithi atholakalayo. Oda ithikithi lakho lesitimela nge Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Ikusasa Lohambo” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/future-of-travel/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, futhi ungangena esikhundleni se-pl to fr noma i-nl nezilimi eziningi ozikhethayo.
I-futureofTravel I-SpaceTourism Izindlela Zokuqeqesha Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi I-TravelandTransportation
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Sept 2020Oct-2020-nov 2020Dec 2020-Jan 2021Febhuwari 2021Mar 2021Ephreli 2021Meyi 2021Jun 2021Jul 2021Agasti 2021